PressReader - Isolezwe: 2018-06-14 - Nathi siyi-IFPWB sithi sekwanele
Nathi siyi-IFPWB sithi sekwanele
Isolezwe - 2018-06-14 - IZINDABA -
EZINSUKWINI ezimbalwa ezedlule sibone ukwanda kokubulawa kwabasifazane befela ezandleni zababezwana nabo nokungenze nganquma ukuphonsa esivivaneni nami. Inzima indaba yokuhlukunyezwa kwabesimame kuleli zwe likaMthaniya. INingizimu Afrika ihamba phambili ezibalweni zokuhlukunyezwa kwabesimame uma iqhathaniswa namanye amazwe. Lokhu kuyiqiniso elingelihle neze nelenza ukuba abasifazane bazizwe bengaphephile emphakathini. Njenge-IFPWB eGauteng asihambisani neze naleli chilo lokuhlukunyezwa kwabasifazane.
Ukwanda kwezibalo zamacala okuhlukumeza nokubulawa kwabesifazane kuyisihlava esidinga ukusukunyelwa ngezinyawo zombili ukuze sinqandeke umonakalo ungakabi mkhulu. Yebo khona okwenzekayo kuyakhathaza futhi kuyadumaza, kepha lisekhona ithemba lokubuyisa isithunzi sezwe lethu nesithunzi sowesifazane. Okukhathaza kakhulu ngalolu dlame olubhekiswe kwabesifazane ukuthi izwe lethu linemithetho evikela amalungelo abo bonke abantu okuhlanganisa nawabesifazane kepha lawa malungelo awabonakali empilweni yabantu njengoba abesimame besaqhubeka nokubhekana nodlame olubhidlangile olubhekiswe kubo.
Ukubulawa ngokugwazwa kukaSheila Mosidi Kopanye, enyakatho nePitoli, eMabopane, ngabezwana naye nokubulawa kukaNomsa Maduna odutshulwe ngabezwana naye eMofolo, eSoweto, kuveza obala ukuthi impilo yabesifazane isengcupheni nokuthi udlame olubhekiswe kwabesifazane yinkinga enzulu edinga isisombululo ukuze kusizakale wonke umuntu ngoba phela amalungelo abesifazane ngamalungelo esintu jikelele.
Ukuze sithole isisombululo sale nkinga kumele siqale sithole umnyombo wayo. Nakuba iminingi, kepha okuhleli obala kuhle kwezinqe zesele, indlela abesilisa abazibona benegunya ngayo phezu kwabesifazane nokubenza babone abesifazane njengempahla yabo nokwenza bazizwe bedelelekile njengamadoda uma baliwa.
Azibuyele emasisweni ma-Afrika, njengesizwe kufanele sifundise abesilisa ukuthi abesifazane banelungelo lokuhlonishwa njebantu, bangaphathiswa okwempahla esetshenziswayo bese ilahlwa kanjalo noma nini noma kuphi. Asibhukule ma-Afrika silwe nalokhu kuziphatha nokuzithwala kwabesilisa okubenza babulale owesifazane ngoba emtshela ukuthi ucu alusahlangani. Abesilisa kumele bafunde ukwamukela ukuthi uma ubudlelwane sebuphelile busuke sebuphelile, impilo iyaqhubeka.
Likhulu iqhaza lekhaya nomphakathi empilweni yomuntu. Ngaphambi kokuthi umuntu akhule akwazi ukuzicabangela kahle nokuzithathela izinqumo ezinqala ngempilo, ikhaya ilona elibhekele ukukhulisa nokufundisa umuntu ngezindlela ezilungile nezingalungile emphakathini, ikhaya ilona elibhekene nokucija indlela umuntu acabanga ngayo ngokumyala nokumbonisa. Umphakathi wona ube usugcizelela lokhu okufundiswe ekhaya. Kuyamangaza-ke esikhathini samanje ukuthi siyizwe sizithole sikule nkiyankiya yokuhluleka ukubekezelelana uma singaboni ngaso linye, okusho kona ukuthi sihambe sahamba sahluleka ukukhulisa nokufundisa abantwana bethu ngokubaluleka komuntu wesifazane nangokubaluleka kwempilo yomuntu.
Kumele silwe nesikompilo elifundisa isintu ukuthi owesifazane ungaphansi kowesilisa ngoba yizo kanye lezi zimfundiso ezenza abesifazane bazithole sebehlukumezeka emphakathini amalungelo abo acindezeleke. Asilweni impela nesikompilo elifundisa isintu ukuthi owesifazane kumele abekezelele ukushaywa, ikakhulukazi kwabashadile. Sidlulile isikhathi sokuthi ukuhlukunyezwa kwabesifazane kubeyinto enyathelwayo emndenini nasemphakathini kuthuleke sengathi akwenzekanga lutho.
Kwanele manje ukuthi abantu besifazane baphenduke ukudla kwenduku nsuku zonke.
Phela abantu besifazane bakheke ngendlela ekhethekile, kabaphiwanga amandla nezikhwepha njengantu besilisa, umuntu wesilisa uphiwe amandla okuzivikela yena nababuthaka kunaye, okubalwa abesifazane nezingane. Mabakuqonde abesilisa ukuthi lawa mandla abanawo awokuvikela akuwona awokuhlukumeza nokubulala.
Okubalulekayo nokumangazayo ngalezi zigilamkhuba ukuthi azicabangi ngobunzima ezifaka kubo umndeni uma zigila lo mkhuba. Kazicabangi ukuthi kubuhlungu kangakanani emndenini sewuthola izindaba ezishaqisayo zokubulawa ngesihluku esinyantisayo soyilunga lomndeni, ebulawa yisithandwa sakhe noma umyeni wakhe. Azicabangi ngisho nabantwana abazosala dengwane bengenamzali.
Kuyithemba lethu njengeIFPWB ukuthi ngelinye ilanga ebasifazane bakwazi ukuhlala ngokuthula, bakwazi ukuzizwa bevikelekile futhi bephephile emndenini nasemphakathini abaphila kuyona. Siyazizwa-ke nokho izincomo ezenziwe zokuba kuqine isandla somthetho ukuze izigilamkhuba zithole izigwebo ezinzima kepha lokhu angeke kube isisombululo njengoba kungukwelapha ukugula kuphela ngaphandle kokwelapha imbangela yokugula. Yebo kumele bagwetshwe ngendlela efanelekile abenza lububi kepha umnyombo usemakhaya nasemphakathini, yilapho kumele kuqalwe khona kuguqulwe izingqondo zabantu nendlela abacabanga ngayo ngomuntu wesifazane.
Amakhaya kumele andlalele isisekela esifanelekile sokuthi abesilisa nabesifazane kumele baphilisane kanjani. Abazali mabasondele ezinganeni zabo bazikhulise ngendlela enesithunzi nehlonipho amalungelo abobonke abantu. Umphakathi wonkana mawuyisukumele indaba yabesifazane abadliwa uswazi, ulwisane nayo. Uma nje siyibambe lapho, mkhulu umehluko esingawubona ezweni lethu.
Siyi-IFPWB sidlulisa ukududuza emindenini yabo bonke abesifazane abathathwe udlame olubhekiswe kwabesifazane, imicabango yethu nemithandazo yethu ikanye nabo ngalesi sikhathi esinzima kangaka.
UNksz Nonhlanhla Makhuba iPhini likasihlalo we-IFP Women’s Brigade eGauteng.